Uthotho lokubukela iapile 6 vs uthotho lweewotshi
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uthotho lwe-Apple 6 kunye no-Apple Watch Series 3
Uthotho lwe-Apple 6 kunye no-Apple Watch Series 3
UApple ukhuphe iperi yeewatchwatches ezintsha Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye nangona enye yazo iApple Watch SE efikelelekayo, ngoku uApple Watch Series 3 oneminyaka emithathu uhlala njengenketho kwiwebhusayithi yeApple & apos. Ithetha ukuba apile usayibona njengewatchwatch esebenzayo nanamhlanje. Kodwa ukuba wena & apos; sele unyikimisile uthotho 3, unokucinga ngokutshintshela kuthotho 6. Emva kwayo yonke loo nto, izizukulwana ezithathu zixhuma kakhulu, akunjalo?
Ewe kunjalo. Ke, masijonge indlela i Uthotho lwee-Apple 3 Thelekisa entsha kraca Uthotho lweeApple 6 kwaye ukuba kufanelekile ukuyiphucula okanye ukuyithenga intsha.
Uthotho lweApple Watch 6 vs Apple Watch Series 3: uyilo
Uyilo-lobulumko alutshintshanga kangangeminyaka kusapho lwe-Apple Watch. Ngokuboniswa kucinyiwe, awunokwazi ukwahlula bobabini ngaphandle. Kukho umahluko omkhulu, nangona kunjalo.
Okokuqala, iApple Watch Series 3 iza ngobukhulu obahlukeneyo. Incinci yi-38mm kwaye enkulu kune-42mm, ngelixa i-Apple Watch Series 6 iza nge-40mm kunye ne-44mm. Ngelixa umahluko weemilimitha ezimbini usenokungavakali ngathi ungaphezulu, iiapos zibaluleke ngakumbi kunokuba ucinga ukuba wakuba ujonge omnye umahluko omkhulu woyilo-umboniso.
I-Apple Watch Series 6 ngasekhohlo, uthotho 3 kwilayini I-Apple Watch Series 3 inomboniso omncinci kakhulu kwaye ii-bezels ezityebileyo ezijikelezileyo zenza ukuba ibonakale ngathi yeyomhla. Ngapha koko, ngomzimba omkhulu we-2mm, iApple Watch Series 6 ine-30% enkulu yokubonisa umbulelo kwii-bezels zayo ezincinci. Ngokucacileyo, kwisikali se-smartwatch, i-30% luphuculo olukhulu, isenza ukuba i-6 kube lula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ibe nobuhle ukujonga nayo. Ngokwendalo, ngobukhulu obukhulu buza ngakumbi iipikseli ngokunjalo, isisombululo seApple Watch Series 6 siyi-368x448 xa kuthelekiswa ne-312x390 yoluhlu lwe-3. Oku kukuvumela ukuba ungaboni ulwazi ngakumbi kodwa ujonge ubukhali.
I-Apple Watch Series 6 vs Series 3 isayizi yokubonisa ukuthelekisa Ukuthetha kuyilo, kuya kufuneka sikhankanye izinto ezicebileyo kunye nemibala onokuyifumana kunye neApple Watch Series 6. Ngelixa uthotho 3 luza nomzimba wealuminium, uthotho lwakho 6 inokwenziwa nakwintsimbi engenasici kunye neetitan. Ewe, umahluko usebenza ngokufanayo, uhlala ixesha elide kwaye, ewe, kuyabiza.
Ngothotho lwe-6, iApple yongeze ukhetho lwemibala ngakumbi kunangaphambili. Ngaphandle kweSilivere neNdawo yeGrey, uthotho 3 & apos kuphela imibala, uthotho 6 luza ngeGold, Blue kunye neApple & apos; utyikityo lweMveliso RED. Ukuba ukhetha umzimba wensimbi ongenasici, ufumana iGraphite njengombala kodwa uphulukane nabanye abaninzi. Okufanayo kuya kukhetho lwe-titanium, ekuphela kwalo luza kwi-Space Black.
Ngaphandle komboniso, kuninzi okutshintshileyo phantsi kwe-Apple Watch kwisithuba seminyaka emithathu, isenza isongezo esitsha kulungelelwaniso ngakumbi. Masikhe sijonge.
I-Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 3: amanqaku
Iinjongo zeApple kunye neapos yeApple Watch ngokucacileyo kukuyenza ibe liqabane elifanelekileyo lezempilo. Kwaye Apos apho uninzi lweenzame kugxilwe kuko kwiminyaka edlulileyo. Kodwa nokuba awukhathazeki malunga nokuhlaselwa sisifo sentliziyo, zininzi izinto onokuzonwabela ukuba ungaya kuthotho lwee-Apple Watch 6. Ngokucacileyo, imodeli entsha yenza konke okusemandleni angaphezulu nangaphezulu, ngoko ke siza kugxila 'ngaphezulu' ngokudwelisa ezinye zezinto eziphambili kuthotho lwe-6 olungenalo uthotho lwe-3.
Ewe ii-algorithms ze-Apple Watch zilungile ekufumaneni xa ufuna ukujonga iwotshi yakho kwaye uvule isikrini ukuze ujonge ixesha, izaziso njalo njalo. Kodwa ngamanye amaxesha ufuna nje ukuyikroba ngexesha lentlanganiso ngaphandle kokuziphatha kakubi. Kule meko nakwezinye iimeko ezininzi, umboniso osoloko uboniswa ubaluleke kakhulu.
Ukwenza ukuba kungafuneki kakhulu kwibhetri, iApple Watch iyanciphisa umboniso wayo kancinci xa ikwimowudi ehlala ikho kwaye yehlisa izinga lokuhlaziya kwi1Hz. Ewe kunjalo, ukuba ufuna ukolula ubomi bakho bebhetri ubuninzi, ungayicima into ehlala ikhona nangaliphi na ixesha.
Ukulinganisa ukugcwaliswa kweoksijini yegazi
I-Apple kunye ne-apos; ikratshi elikhulu xa kusenziwa kwi-Apple Watch Series 6 entsha yinkqubo ye-Oxygen yeGazi. Sisixhobo esibalulekileyo sokulandela umkhondo weempawu zakho ngexesha lokuzilolonga okunzima kodwa kwezi ntsuku kunokuba luncedo kuzo ukufumanisa iimpawu ze-COVID-19 zakuqala . Nokuba awuyiyo indawo yokuzivocavoca, oku kunokuba luncedo kuwe.
Leyo yeyona nto iphambili enxulumene nempilo okhoyo kunye neapos; siphoswa zii-Apple Watch Series 3. Enye i-Apple engazange isilele ukuyikhankanya wasindisa ubomi obuninzi sele. Ngokuqinisekileyo, ukuba ungamashumi amabini okanye amashumi amathathu ungacinga ukuba imiba yentliziyo ayisiyiyo inkxalabo yakho okwangoku. Kodwa iApple Watch ifumene ukungaqheleki nakubantu abancinci kwaye yabanceda ukuba bafumane unyango kwangoko, kungcono ngayo kunokuba kungenjalo.
Ukufunyanwa kokuwa kunye nokufowuna okungxamisekileyo kwilizwe liphela
Enye into enokubusindisa ubomi. Ukuba ii-accelerometer ze-Apple Watch 6 zifumanisa ukuba uwile, zikukhuthaza ukuba uthi ukuba ulungile okanye ufuna iinkonzo zongxamiseko ezibiziweyo. Ukuba awuthathi naliphi na inyathelo ngaphakathi komzuzu, umnxeba wenziwa ngokuzenzekelayo. Ukuba nenkonzo ifumaneke kumazwe aphesheya ngokucacileyo kuyinzuzo enkulu ukuba nguwe kunye nohlobo oluhamba phesheya rhoqo, ubuncinci.
Ngokobuchwephesha leyo yinto onokuyenza ngeendlebe zakho, kodwa ukuba une-Apple Watch Series 6, iya kukuxwayisa xa & ampos; kwindawo ekuyo kakhulu kwaye inokukwenzakalisa.
Leyo lukhetho oluza neprimiyamu yexabiso kodwa ubuncinci unokukhetha kuyo ngothotho 6. Ngayo, ungashiya i-iPhone yakho ekhaya xa usiya ubaleka kwaye uthathe iifowuni ngqo kwi-Apple Watch yakho. Ewe kunjalo, ikwenza ukuba ufumane izaziso xa ungaphandle kwebluetooth kwaye uthumele iimpendulo.
Ngaba ii-Apple Watch Series 3 band zisebenza kunye neApple Watch Series 6?
Kulungile, mhlawumbi wena kunye neapos sele uqinisekile ukuba iiApple Watch Series 6 kufanelekile ukuba ziphuculwe kodwa unayo ingqokelela yeebhendi zoluhlu lwe-3 olithandayo. Ngaba ungazisebenzisa ngeApple Watch yakho entsha? Ngethamsanqa kuwe, impendulo ngu-EWE! Kodwa! Ukuhambelana kweebhendi kuphakathi kweewotshi ezilinganayo. Kule meko, umahluko we-2mm phakathi kwe-Series 3 kunye ne-Series 6 ayibalulekanga. Iibhanti ezivela kwi-Apple Watch Series 3 encinci zinokusetyenziselwa i-Series 6 encinci kunye nezo ze-Series 3 ezinkulu kunye ne-Series 6 enkulu.
I-Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 3: amaxabiso
Ngoku, ixesha lokuthelekisa amaxabiso ngokukhawuleza ukuba awunayo i-Series 3 yewotshi. Ngalo lonke udibaniso lwezixhobo, ubungakanani, uqhagamshelo kunye neebhendi, kukho amashumi amaxabiso apheleleyo ohlukeneyo onokuwafumana ngelixa uqwalasela iApple Watch. Apha ngezantsi, uya kufumana amaxabiso okuqala kwimodeli nganye:
40mm / 38mm ukusuka $ 399 ukusuka $ 199
44mm / 42mm ukusuka $ 429 ukusuka $ 229
40mm kunye neselula ukusuka $ 499 N / A
44mm kunye neselula ukusuka $ 529 N / A
Ukuba ujonge ukuthenga iApple Watch kwaye unohlahlo-lwabiwo mali lweSiqendu 6, ngokuqinisekileyo leyo yeyokufuna. Kwaye ukuba akunjalo, kusesengcono ukuya kwi-Apple Watch SE entsha kune-Series 3. Ngama- $ 80 ngaphezulu kwe-Series 3, wena kunye ne-apos; ufumana umboniso omkhulu kunye neqela lezinye izinto. Ukuthelekisa ngokupheleleyo phakathi kwee-smartwatches ze-Apple ezingabizi kakhulu, jonga eyethu I-Apple Bukela i-SE vs Apple Watch Series 3 inqaku.
Kwaye ukuba wena & apos; uphinde unyikimise uthotho 3 kwaye ufumene iminyaka embalwa yokusebenzisa kuyo, uluhlu lwezinto ezintsha sisizathu esihle sokunyusa umgangatho. Unokude urhwebe-kwewotshi yakho yangoku kwaye ufumane isaphulelo esihle sokuthambisa isivumelwano. Ngokuqinisekileyo, kunyaka olandelayo kuyakubakho enye iApple Watch, kodwa uluhlu lwezinto ezinokongezwa okanye ukuphucula iApple luya lufutshane kwisizukulwana ngasinye. Eli lixesha elifanelekileyo lokutsala i-trigger, kodwa ukuba awukho ungxamile, unokufuna ukulinda de ULWESIHLANU omnyama , ukuba ngaba kukho naziphi na izinto ezilungileyo ze-Apple Watch Series 6.
Uthotho lweeApple 6
Imodeli entsha, ukuphuculwa kweempawu zempilo, Ukuboniswa rhoqo, ukubekwa kweliso kwi-ECG kunye ne-Oxygen nokunye
-imodeli ebiza ixabiso eliphantsi, ukubetha kwentliziyo kunye nokulandelwa kwemisebenzi, i-GPS kunye nokunye
$ 199Thenga kwiApple
t mobile ukuphuma kubomvu
I-Astropad iguqula i-iPad yakho ibe yicwecwe lokuzoba iMac nePC
I-Peel Smart Remote ijika isixhobo sakho se-Android kunye ne-iOS ukuba ibe sisiKhokelo seTV kunye nolawulo olukude ngaxeshanye
Ungayibonisa njani Impendulo yeJSON ngokuQINISEKA ukuqinisekiswa